Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo Qarax lagula eegtay Buuraleyda galgala ee gobolka Bari – Radio Daljir
Noofember 17, 2018 11:15 b 0
Wararka ay idaacada Daljir ka helayso Buuraleyda galgala ee gobolka bari ayaa shieegaya in qarax miino lala eegtay ciidamo ka tirsan maamulka Puntland .
Qaraxan ayaa waxaa lala bar tilmaameedsaday gaari nooca Cabdi bilaha loo yaqaan oo ay ciidamadu saarnaayeen kaaso oo ku soo wajahnaa magaalada Bosaaso .
inta laxaqiijiyay qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada amniga , kuwaas oo dhaawacooda loo soo qaaday Isbitaalka Bandar Qaasim ee magaalada Bosaaso .
lama oga ciidamadan qaraxa lala eegtay qaybta ay ka tirsanaayeen .balse Buuraleyda galgala ee gobolka bari waxaa Al-shabab ku la dagaalama ciidamada bada ee Puntland qaytooda ladagaalanka argagixisada iyo ciidamada PSFta Puntland.
Al-shabaab ayaa mas,uuliyada qaraxan sheegatay, mana jirto dhanka Puntland wax war ah oo ka soo baxay .